စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 28/08/2020)
Positano အီတလီတောင်ပိုင်းရဲ့ Amalfi ကမ်းခြေပေါ်ချောက်ထဲဘက်ရွာဖြစ်ပါသည်. Neptune အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဒဏ္ဍာရီအဆိုအရ, တစ်ဦး nymph ကိုခစျြ၏ထွက်သူသည်ပင်လယ်၏ဘုရားသခငျ. ၎င်း၏ကြော beachfront နှင့်မတ်စောက်သော, နှင့်အတူစီတန်းကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများ စျေးဆိုင် နှင့်ကဖေးကကျော်ကြားဘာလဲ. သင်နှင့်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ဟာဗာဂျင်းမာရိ၏တစ်ဦး 13 ရာစုဘိုင်ဇင်တိုင်းအိုင်ကွန် featuring Chiesa di စန်တာမာရီယာ Assunta သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်.
အိပ်မက်ထဲသို့နင်းလိုပဲ, Positano မေတ္တာ၌ဖြစ်ခြင်းဆင်နွှဲရန်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်! လုပ်ဖို့သိပ်ရှိတယ်; သင်တစ်ဦးရှိသည်ဖို့သေချာနေ တစ်သက်တာ၏ခရီးစဉ်.
ဥရောပ၌သင်၏အကောင်းဆုံးပျားရည်ဆမ်းခရီးခရီးစဉ်ကိုရှာဖွေသည့်အခါ, Hvar, ခရိုအေးရှားစုံတွဲများစာရင်းအပေါ်မကြာခဏဖြစ်ပါသည်! သဘာဝအလှအပမေးရိုး-ကျဆင်းနေ, ရှေးဟောင်းတံတိုင်းကာရံထားသောမြို့များနှင့် Adriatic ၏အဆုံးမဲ့အပြာ: ခရိုအေးရှားသည်ပျားရည်ဆမ်းခရီးသို့မဟုတ်အချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်ရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် အသေးစားချိုး. နေရောင်များများနှင့်အတူ, စပျစ်ဥယျာဉ်, နှင့်စားသောက်ဆိုင် options များ, သင်သည်ဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ဦး တည်ရာနေရာတွင်ဥရောပ၌ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်သောအခါသင်ကိုချစ်လိမ့်မည်.
Gothic အဘိဓါန်ဗိသုကာနှင့်ပြည့်ဝ၏ဤအသေးငယ်တဲ့တံတိုင်းကာရံထားသောမြို့စုံတွဲများအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန်တစ်နေ့တာအတွင်းအနည်းငယ်သမိုင်းနှင့်ရှုခင်းများကြည့်ခြင်းနှင့်အတူစိတ်အေးလက်အေး Vibe ရှာဖွေနေသည်. ရွက်အတွက်ခရိုအေးရှားတွေ့မြင်ယေဘုယျ-နှင့်ဖွင့်ကရင်ဆိုင်ရပါစေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နေစဉ်, ထို့အပြင်တစ် ဦး အပေါ်ရောက်ရှိရန်အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်း ပျားရည်ဆန်းလယခုလဟူ.လည်း, Uber တရားဝင်ဒေသတွင်း၌ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပါသည်, ဒါပေမယ့်ဆက်ဆက်မပေးသင်ထင်လိမ့်မယ်လမျး၌.
ဆွစ်ဇာလန် သင်သည်ဥရောပ၌ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်ခွာခြင်းကိုစဉ်းစားသောအခါပထမ ဦး ဆုံးသောသူဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ, ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေဖြစ်ပါသည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်. အများဆုံးဥရောပနိုင်ငံများသို့အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ဆွေမျိုးသော်လည်း, ဆွစ်ဇာလန်လက်ရာမြောက်သောသဘာဝကရှုခင်းပိုင်ဆိုင်. picturesque ကျေးရွာပေါင်း, ခေတ်မီမြို့ကြီးများ, သငျသညျဆောင်းရာသီတွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းရှိမရှိကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များနှင့်သင့်ပျားရည်ဆမ်းခရီးတစ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်နောက်ခံ, နွေဦး, နွေရာသီသို့မဟုတ် ကျ.
အီတလီနိုင်ငံမြို့တော်ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံစုံတွဲတစ်နှစ်သက်တော်မူ၏. ကအများဆုံးဥရောပမှာတော့ပျားရည်ဆမ်းခရီးဦးတည်ရာနေရာများစာရင်းကိုအပေါ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးတစ်ခုဖြစ်သည်, လက်ထပ်အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးအရက်အနည်းငယ်ခံစားရန်ပြီးပြည့်စုံသောကြောင့်. ၎င်း၏ထံမှ cobbled လမ်းများ နှင့်အထင်ကရအဆောက်အမှ ပြတိုက်, ရုပ်ရှင်ရုံ, နှင့်ရင်ခုန်စရာ စားသောက်ဆိုင်, သငျသညျအတူတူပျော်မွေ့ဖို့အဆုံးမဲ့အတွေ့အကြုံရှိသည်လိမ့်မယ်.
သငျသညျရောမပွဲကြည့်စင်သို့သွားရောက်ရမည်ဖြစ်သည်! သူတို့ကအသေးစိတ်၎င်းတို့၏ grandeur နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အကမ္ဘာတစ်လွှားလူသိများကြသည်. အချည်းနှီးသောရုပ်ရှင်ရုံကိုကြည့်ရှုရန်မျက်မှောက်များမှာ. ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအော်ပရာအနုပညာရှင်များဖျော်ဖြေပွဲနှင့်အတူဘုရားရဲ့စတင်သည်လိုက်တဲ့အခါ, အတွေ့အကြုံဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းသည်.